PDF ဖိုင်များအတွက် Online reader ပြုလုပ်ခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
17-08-2010, 06:30 AM
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်တွင်. လည်ပတ်၍ပညာရှာနေကြသော အသင်းဝင်တို့အတွက်. PDF ဖိုင်များကို အရင်က ဒေါင်းလုပ်ချပြီးမှ ဖတ်နိုင်သော်လည်း ယခုအခါတွင် ဒေါင်းလုပ်ချစရာမလို ဖိုရမ်အတွင်း မှာပင် ဖတ်နိုင် ပြုလုပ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်...။
မှတ်ချက်။ ။ တိုက်ရိုက်လင့် ဖြစ်ရပါမယ်... ဥပမာ- http://myanmar.com/newspaper/myanmarahlin/Aug16.pdf ဒါမျိုးပါ...။
အဲ့ဒီ အတွက် ပို့စ်တင်မယ်ဆိုရင် Reply ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်...
Text Editor မှာ ဒီလို Adobe PDF တံဆိပ်အမှတ်အသားလေး တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အထက်ပ်ကုတ် ၂ ခုကျလာပါလိမ့်မယ်..
အဲ့ဒီ PDF ကုတ် ၂ ခုကြားမှာ.. မိမိတို့ မျှဝေချင်တဲ့ ပီဒီအက်ဖ် လေးကို အပ်လုပ်တင်ပြီး ထည့်လိုက်ယုံပါ...။
ဥပမာ - http://myanmar.com/newspaper/myanmarahlin/Aug16.pdf ဒီလိုလင့်လေးပေါ့.. နောက်မှာ .pdf
သတင်းစာများအပါအ၀င်တခြား ဂျာနယ်များလည်း ထိုနည်းအတူ.. မျှဝေနိုင်ပါတယ်..။ ဒေါင်းလုပ်အတွက်လည်း ပူစရာမလိုပါ.. ဒေါင်းလုပ်လင့်တခါတည်းပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်...။
ကိုဦး တို့ မိုးလွင်တို့ ဆန်းမောင်တို့ သတင်းစာ တင်ပေးနေသော အသင်းဝင်များအဆင်ပြေကြရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင် 26 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုပျင်း, ကိုဦး, ခင်မေခ, ဆန်းမောင်, မိုးလွင်, ဝင်းအောင်, ဇေယျာအေး, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မြင့်မိုရ်, နိုးတူး, Aung Aung, bonge, hellboy, kyaukphyu, Lwin Thu, mjkomg012@gmail.com, phoetharlay, thura.it, thureinsoe, tu tu, yawnathan, yelinoo, zo
ပြန်စာ - PDF ဖိုင်များအတွက် Online reader ပြုလုပ်ခြင်း
ကို၇ဲအောင် ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တင်တာအောက် က ပုံလို ဖြစ်နေလို့ကုညီပါဦးအစ်ကို
ဒါလေးအဆင်ပြေ၇င် နောက်ဖိုင်တွေကျ၇င် တခါတည်းဖတ်လို၇တော့ မှာအစ်ကိုေ၇........
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဝင်းအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဝင်းအောင်ရဲ့ Error က တိုက်ရိုက်လင့် မဟုတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
အောက်မှာကျွန်တော် ကိုဝင်းအောင်ရဲ့ pdf လေးကို mediafire က တင်ပီး နမူနာလုပ်ကြည့်တာရပါတယ် ... (ခွင့်မတောင်းမိလို့ တောင်းပန်ပါတယ်... )
တိုက်ရိုက်လင့်ထည့်မှ ရပါတယ် ... တိုက်ရိုက်လင့်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ (ကျွန်တော်သိတဲ့ နည်းလေးပါ )
ကျွန်တော်တို့ mediafire မှာ upload တင်ပီးရင် ဒေါင်းလုဒ်လင့်ရပါတယ် အဲ့ဒီကနေပီး ဒေါင်းလုဒ်ချပါတယ်
ဒေါင်းလုဒ်ချဖို့ Click here to start download ကိုနှိပ်ရပါတယ် .. ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီ Click here to start download ပေါ်မှာ right click ထောက်ပီး copy link location ကို နှိပ်လိုက်ပါတယ် ... အဲ့ဒီအခါမှာတော့
ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ဒီ ဒေါင်းလုဒ်ရဲ့ တိုက်ရိုက်လင့်ကိုရပါတယ် .... အဲ့ဒီ လင့်ကို PDF ကုတ် နှစ်ခုကြားထဲမှာထည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ် ...
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ တခြားနည်းတွေလည်း ရှိမှာပါ .. သိသူများ ပြောကြားပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ .....
pdf လေးကို အဲ့လိုတင်ပီး တိုက်ရိုက်လင့် ယူခဲ့ကာ Pdf Reader လေး လုပ်ကြည့်ပါအုံး ကိုဝင်းအောင်ရေ ...
Last edited by မြင့်မိုရ်; 19-08-2010 at 10:32 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ မြင့်မိုရ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုဦး, ခင်မေခ, ဝင်းအောင်, သက်တန့်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, နိုးတူး, bonge, kyaukphyu, KznT, mjkomg012@gmail.com, phoetharlay, Ye Aung, zo
တခြား ifile တို့က တိုက်ရိုက်လင့်မဟုတ်တာ ရမှာမဟုတ်ပါ...။
မီဒီယာဖိုင်းယားအတွက်ကတော့ မြင့်မိုရ် ရှင်းပြပြီးသားပါ...
တိုက်ရိုက်လင့်ဆိုသည်မှာ ဤလင့်မျိုးကို ဆိုလိုသည်..( http://www.mrtv3.net.mm/newpaper/198newsm.pdf )
198 သည်.. သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်ကိုရည်ညွှန်းသည်..။
အကယ်၍ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ သတင်းစာထွက်ပြီး တင်ချင်ပါက...။ ဤလင့်အတိုင်းတင်ရပါမည်...
$ညိုမင်းလွင်$, ဆန်းမောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မြင့်မိုရ်, aungphyo, bonge, kyaukphyu, mjkomg012@gmail.com, phoetharlay, zo
အခုလို တင်တာကို ကျနော် သေချာနားမလည်ဘူးဗျ။ ကျနော်မှာလဲ wrodpress နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်လေး တစ်ခုရှိပါတရ်။
အခုလို pdf ဖိုင်တင်ချင်ရင် ဘရ်လို လုပ်လို့ရနိုင်မလဲ ကူညီပေးကြပါအုံးနော်။
'' မှတ်ချက်။ ။ တိုက်ရိုက်လင့် ဖြစ်ရပါမယ်... ဥပမာ- http://myanmar.com/newspaper/myanmarahlin/Aug16.pdf ဒါမျိုးပါ...။ အဲ့ဒီ အတွက် ပို့စ်တင်မယ်ဆိုရင် Reply ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်... Text Editor မှာ ဒီလို Adobe PDF တံဆိပ်အမှတ်အသားလေး တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်... '' အဲ့ဒီနေရာမှ မရတော့တာပါ။ ကျနော်က ညံ့တာဖြစ်မှာပါ။ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ သေချာလေး ရှင်းပြပေးပါအုံးနော်။
Text Editor မှာ ဒီလို Adobe PDF တံဆိပ်အမှတ်အသားလေး တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုဒါ အကိုပြောတဲ့ Reply ခလုတ်ကိုယ် နိုပ်ပြီးရင် အောက်ကပုံမှာ ကျနော် မြှားအကြီးနှင့်ကိုယ်ပြထားပါတယ်.. အစ်ကို ရဲအောင်လည်း အပေါ်ဆုံးမှာ ပြထားပါတယ်.. ပုံသေးနေဒါလားလို့ပါ..
Free hosting site တွေမှာတင်ပြီး လင့်ခ်ယူလာ၍ တင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကိုမြင့်မိုရ် ရှင်းပြထားပါတယ်.. ပြန်လည် ပြီးတော့ ကြိုးစားကြည့်ပါအုံးဗျာ..
ဇော်ရဲပိုင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, နိုးတူး, kaung kin lu, zo
pdf ဖိုင်းဖွင့်၇င် error ပြနေတာ ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ လိုအပ်တာ၇ှိ၇င် လမ်းညွှန်ပေးပါ ခင်ဗျား
reader က ဘာဒေါင်း၇မလဲ မသိလို ကူညီပါ ဖိုရမ်းမှ အကိုအစ်မ များခင်ဗျာ
Professional ဖြစ်လိုသူများ Internet မှ လေ့လာနည်း မောင်ပေါ်ဦး Internet နှင့်ဆိုင်ရာများ502-02-2014 11:07 AM
အင်တာနက်အား အကျိုးရှိစွာ အသုံးချခြင်း KznT အထွေထွေဗဟုသုတ 10 13-10-2011 05:06 PM